Rayson | Mmiri nke oge opupu ihe ubi
Na Rayson, Mmelite teknụzụ na ihe ọhụrụ bụ uru anyị. Ebe ọ bụ na o guzobere, anyị na-elekwasị anya na ịhazi ngwaahịa ọhụrụ, imeziwanye ogo ngwaahịa, na ijere ndị ahịa ozi. Oge opupu ihe ubi na-acha uhie uhie bụ onye nrụpụta zuru oke na onye na-eweta ngwaahịa dị elu na ọrụ otu nkwụsị. Anyị ga-eme ya, dịka oge niile, na-arụ ọrụ ngwa ngwa. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara akwa mmiri na ngwaahịa ndị ọzọ, na-eme ka anyị mara. Ndị na-emepụta ndị na-emepụta anyị họọrọ ya site na nlele ahụ site na nlele na ahụmịhe ịchọta akwa kwesịrị ekwesị maka atụmatụ.